Byalah ဗျာလ Every race, every religion has his own mythical symbolizes, statues foralong time ago. The Rakhine (Arakan) also has his own mythical creature that is unknown not only in the world but also other religions in Myanmar. It can be found in ancient pagodas and other archeological buildings as ancient treasures. That mythical antelope has remained with Rakhine dynasty foralong time. The Rakhine (Arakan) called it “Byalah” . It is only one creature but made up of powerful nine animals’ parts. They are – * 1. Trunk of an elephants * 2. Eyes ofadeer * 3. Horn ofarhinoceros * 4. Tongue ofaparrot * 5. Body of the carp * 6. Tail ofapeacock * 7. Ears ofahorse * 8. Fangs ofatiger * 9. Paws ofalion It takes the powerful, strong components of the nine animals. The tongue of the parrot refers to articulation. The tail of the peacock means the beauty, the ears of the horse for good sense of hearing, the eyes of the deer are for sharpness of the sight and the horn of the rhinoceros ,the fangs of the tiger, paws ofalion and trunk of an elephant are for great strength. The Rakhine believed that “Byalah” makes them strong and healthy and can avoid the disaster .It can firstly be found in religionist-building in Vesila age. There will be other different styles of “Byalah” in early of Vesila age. Byalah, the ancient creature of the Rakhine (Arakan) is placed to at the ancient pagoda , temple and famous building asanine powerful guardian.
Posted by www.sanoomg.com at 5:46 AM No comments:
ကမ္ဘာဦးကတည်းက လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်း၌ ၄င်းတို့၏ ဒဏ္ဍာရီ ဆန်သော အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ ရုပ်ထုများ ရှိခဲ့ကြသည်။ အလာတူပင် ရခိုင် လူမျိုး၌လည်း ဒဏ္ဍာရီဆန်သော အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ ရုပ်ထု တစ်ခုရှိသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းရုပ်ထုကို ကမ္ဘာကပင် မဆိုထားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ပင် လူအတော်များများ မသိရှိ ကြသေးပေ။ ၄င်းတို့ကို ရှေးဟောင်း စေတီပုထိုးများ၏ ကျောက်ဆစ်လက်ရာများတွင် ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးရှိသော ရှေးဟောင်းလက်ရာ အမွေအနှစ်အဖြစ် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်း သတ္တ၀ါကို ရခိုင် လူမျိုးတို့က “ဗျာလ” ဟုခေါ်ဆို ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ သတ္တ၀ါ မှာရခိုင် လူမျိုးတို့၏ ရှေးရိုး စဉ်ဆက် တစ်လျှောက် ရှိခဲ့သော ဒဏ္ဍာရီဆန်သော သတ္တ၀ါဖြစ်သည်။
ယင်း ‘ဗျာလ’ ကို သတ္တ၀ါ ကိုးမျိုး၏ ကောင်းမြတ်သော ခွန်အား စွမ်းအင် ရှိသော သတ္တ၀ါတို့၏ အစိတ် အပိုင်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ထားသည်။ယင်းသို့ သတ္တ၀ါ ကိုးမျိုး၏ အစိတ် အပိုင်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ထားခြင်းကြောင့် ‘န၀ ရူပ ဗျာလ’ ဟုလည်းခေါ်သည်။ အဆိုပါ ‘န၀ ရူပ ဗျာလ’ ရုပ်တွင် ပါရှိသည့် သတ္တ၀ါ ကိုးမျိုး၏ အစိတ်အပိုင်း များမှာ -
* ၁. ဆင်နှာမောင်း
* ၂. သမင်မျက်လုံး
* ၃. ကြံ့ချို
* ၄. ကြက်တူရွေးလျှာ
* ၅. ငါးကြင်းကွက်
* ၆. ဒေါင်းအမြီး
* ၇. မြင်းနားရွက်
* ၈. ကျားအစွယ်
* ၉. ခြင်္သေ့လက်ဝါး တို့ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ထူးခြားသော စွမ်းအင်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်ကောင်တည်း ဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ် ထားခြင်းမှာလည်း ဗျာလ သတ္တ၀ါ ၏ ထူးခြားမှုကို ရည်ညွှန်းထားသည့် အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်သည်။ ဗျာလတွင် ပါရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများ အနက် ကြက်တူရွေးလျှာသည် စကား ပရိယာယ် ကြွယ်ဝခြင်းကို လည်းကောင်း ၊ ဒေါင်းအမြီးသည် လှပ တင့်တယ် ခြင်းကို လည်းကောင်း ၊ မြင်း နားရွက်သည် အကြား အာရုံ ထက်မြက်ခြင်း ကိုလည်းကောင်း ၊ သမင်မျက်လုံး သည် အမြင်အာရုံ စူးရှခြင်းကို လည်းကောင်း ၊ငါး၏ ကိုယ်ထည်သည် လျင်မြန် ဖျတ်လတ်ခြင်းကို လည်းကောင်း ၊ ကြံ့ချို ၊ ကျားစွယ် ၊ခြင်္သေ့ လက်ဝါး ၊ ဆင်နှာမောင်း သည် စွမ်းအင် ကြီးမားခြင်းတို့ကို လည်းကောင်း အသီးသီး ကိုယ်စားပြုပါသည်။
အဆိုပါ သတ္တ၀ါ ကိုးမျိုး တို့၏ အစိတ်အပိုင်းဖြင့် တန်ဆာ ဆင်အပ်သော သတ္တ၀ါအား ထားရှိ ခြင်းဖြင့် “အဗျာလော- ဘေးဥပါဒ်ကို မဖြစ်စေတတ်ဘဲ ၊ လာဘော - လာဘ်လာဘကိုသာ ဖြစ်စေတတ်၏“ ဟု ရခိုင်လူမျိုးတို့ ယုံကြည်ထားကြသည်။
ဗျာလကို ရခိုင် ဝေသာလီခေတ် သာသနိက အဆောက်အအုံ များတွင် စတင်တွေ့ ရှိရသည်။ ယင်းထက် ရှေးကျသော ရုပ်ထုများလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားများ ၌ သုံးစွဲသော အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းများတွင် အနည်းငယ် တွေ့ရှိရပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုး တို့၏ ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ် တခုဖြစ်သော ‘န၀ ရူပ ဗျာလ’ ကို ကျောင်းကန် ၊စေတီ ပုထိုးများတွင် လည်းကောင်း ၊ ထင်ရှားသော အဆောက် အဦး များတွင် လည်ကောင်း စွမ်းအင် ကိုးမျိုး ပေါင်းစု ထားသော အစောင့် အရှောက် သတ္တ၀ါ အဖြစ် ထားလေ့ရှိပါသည်။
Posted by www.sanoomg.com at 5:39 AM No comments: Links to this post
မျိုးရိုးအဆက်ဆက် ကိုးကွယ်လာခဲ့သော မဟာမုနိ
PAMELAS GUTMAN ၏ THE MAHAMUNIul;.lxm;ygonfဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
Posted by www.sanoomg.com at 1:02 PM No comments: Links to this post
Friday, 14 August 2009 09:58 ခိုင်နိုင်လင်း
၁၄ ၊ သြဂုတ် ၊ ၂၀၀၉ (ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၉ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်နေ့)
ယင်းသို့ ဆရာတော် ဦးညာဏိဿရ( ယခုသာသနာ့ ဥသျှောင် ပီနန်ဆရာတော် (၀ါ) သီတဂူဆရာတော်ကြီး) အမေးနှင့် ဆရာကြီး၏ အပြည့်အစုံ ဖြေကြားချက်များကို ပြန်လည်၍ ဆရာကြီးက အသံသွင်းပေးခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသည် ရခိုင်စကားဖြင့် အသံသွင်းခဲ့သည်ကို မြန်မာပြည်ရှိတိုင်းရင်းသားများအားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာစကားပြေဖြင့် ပြန်လည်၍ ရေးသားတင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓ၏ ပါဠိတော် အဋ္ဌကထာနှင့် သင်္ဂါယနာခြောက်တန်စသည်တို့တွင် မပါရှိပဲ ရခိုင်ပြည်သို့ မြတ်စွာဘုရား ကြွရောက်လာခဲ့သည်ဟု ရခိုင်ပြည်တွင် ရေးသားပြောဆိုနေကြသည်မှာ ဘုရားဟောတရားတော်နှင့် မကိုက်ညီပါ။ဤအကြောင်းကို ဖြေရှင်းပေးပါ။
ဗုဒ္ဓ၏ ပါဠိတော် အဋ္ဌကထာစသည်တို့၌ မပါရှိပဲ မြတ်စွာဘုရားသည် စန္ဒာသူရိယမင်းကြီးနှင့်တွေ့ဆုံပြီး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကို သွန်းလုပ်ခဲ့ပါသည်ဟု ရေးသားပြောဆိုကြသည်။ ဤအကြောင်းကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးပါ။
အရှင်ဘုရား၏ မေးခွန်း (၂) နှင့် (၃) ကိုတပေါင်းတည်း ဖြေကြားလိုပါသည်။ မေးခွန်းများမှာ တသဘောတည်း ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပါ ဘုရား။ တပည့်တော်သည် ရခိုင်ပြည်သို့ ဗုဒ္ဓသာသနာရောက်လာပုံ မေးခွန်းအပေါ် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည် ဘုရား။ နောက်ထပ်လျှောက်ထားပါမည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်တွင် ယခုကိုးကွယ်နေသော ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ မြောက်ဦးခေတ်ဘုရင်များ အုပ်စိုးခဲ့သောကာလမှ ဆက်ခံယူခဲ့သော ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ ဖြစ်ပါသည် ဘုရား။
မြောက်ဦးခေတ်မတိုင်မှီ လောင်းကြက်မြို့ရှိပါသည်။ ထိုမြို့ကို အုပ်စိုးခဲ့ကြသော ဘုရင်များမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာမင်းများဖြစ်ပါ၍ သာသနိကအဆောက်အဦးများစွာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ရဟန်းပညာရှိများ ထွန်းကားခဲ့ကြပါသည်။ဤလောင်းကြက်ဘုရင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို နေရဉ္ဇမြို့တွင် အုပ်စိုးခဲ့သောဘုရင်များထံမှတဆင့် လက်ခံယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နေရဉ္ဇရာမြို့တွင် ထွန်းကားခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ပုရိန်မြို့မှဆင်းသက်လာသော ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါသည်။ ပုရိန်မြို့တွင် အုပ်စိုးခဲ့သော ဘုရင်များသည် ပဉ္စာမြို့မှ ဗုဒ္ဓသာသနာကို တဆင့်လက်ခံယူခဲ့ကြပါသည်။ ပဉ္စမြို့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာလည်း ဝေသာလီမြို့မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝေသာလီမြို့ကို တည်ဆောက်ခဲ့သော မဟာတိုင်းစန္ဒြားမင်းကြီးသည် မဟာမုနိဘုရားတွင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့ပါသည်။ သိမ်တော်နှင့် ပလ္လင်တော်များကို အသစ်တဖန်တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများ၌ တွေ့ရပါသည်။
တပည့်တော်ရှေ့က လျှောက်ထားခဲ့သည့်အတိုင်း ထိုမင်းကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့သည်ကို မဟာမုနိဘုရားကုန်းတော် ဒုတိယအဆင့် အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ “ယက္ခသေနာပတိပနာဒ” ရုပ်ထုတွင် ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ မဟာတိုင်းစန္ဒြားမင်းသည် မဟာမုနိသိမ်တော်ကို အသစ်တဖန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသဖြင့် မဟာတိုင်းစန္ဒြားမင်းကြီး မတိုင်မှီကပင် သိမ်တော်အဟောင်းနှင့် မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးမှာ ရှိနှင့်နေပြီး ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်း။ ယင်းသို့ဖြစ်လျှင် ဝေသာလီခေတ်မတိုင်မှီ မည်သည့်ခေတ်ရှိသည်ကို ခြေရာကောက်အတိုင်းလိုက်လျှင် ဓည၀တီမြို့တော်မှာ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရေးသားခဲ့သော မြို့တော်မဟုတ်ကြောင်း လေယဉ်ပေါ်မှ ရိုက်ကူးထားသောဓါတ်ပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည် ဘုရား။ အမှတ်တကယ်ရှိခဲ့သော မြို့ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပညာရှင်များ ယုံကြည်လက်ခံထားကြပါသည် ဘုရား။
တပည့်တော်တို့ သမိုင်းများတွင်လည်း တတိယဓည၀တီခေတ်မြို့တော်ကို စန္ဒာသူရိယမင်းကြီး တည်ခဲ့ကြောင်း ဖတ်ရှုရပါသည်။ ဤစန္ဒာသူရိယဘုရင် ဓည၀တီ၌ အုပ်စိုးစဉ်ကာလမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင် အနောက်မဇ္ဖျိမဒေသ၌ ရှိနေချိန် ဖြစ်ပါသည်။ တပည့်တော်လက်ထဲတွင်ရှိနေသော ‘သမ္ပဒါနပကာရဏကျမ်း’ တွင် စန္ဒာသူရိယမင်းကြီးလက်ထက် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ကြွရောက်လာပြီး မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်ကို သွန်းလုပ်ခဲ့ကြောင်း အသေးစိတ်မှတ်ထားပါသည်။
၎င်းအပြင် တောင်ပေါက်ကြီးကျောက်စာကလည်း သက်သေခံနေပါသည်ဘုရား။ မြတ်စွာဘုရားသည် စန္ဒာသူရိယမင်းကြီးအား ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော်နှင့် ရုပ်ထု၊ ဆင်းတုတော်များကို တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် ရရှိအပ်သော အကျိုးတရားများကို ‘သတ္တုဗိမ္ဗပူဇာနိယနိသေသသုတ္တန်’ ဟူ၍ မူရင်းပေစာလည်းရှိပါသေးသည် ဘုရား။
စန္ဒာသူရိယမင်းကြီးအား မြတ်စွာဘုရား ဓမ္မစင်္ကြာတရားဟောကြားနေဟန် ထုလုပ်ထားသော ကျောက်ပြားတစ်ချပ်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဝေသာလီမဟာတိုင်းစန္ဒြားမင်းကြီးက စန္ဒာသူရိယမင်းကြီးအား ဂုဏ်ပြုထုလုပ်ထားသော ရုပ်တုဖြစ်ဟန်ရှိပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရခိုင်ပြည်ဓည၀တီသို့ကြွရောက်ခဲ့စဉ်က သေလာဂီရိတောင်ပေါ်၌ ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ဗျာဒိတ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ‘သမ္ပဒါနပကာရဏကျမ်း’ တွင် အသေအချာ ဖော်ပြထာူးပါသည်။ “ချစ်သားအာနန္ဒာ ငါသည်ဘုရား ဖြစ်ရန်အတွက် ဆယ်ပါးသော ပါရမီတော်ကြီးနှင့် သုံးဆယ်သောပါရမီတော်ငယ်များကို ဖြည့်ဆည်းသောကာလ၌ ဤဓည၀တီပြည်တွင် အလီလီလူအဖြစ် ကျင်လည်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ယခုငါရပ်တန့်နေသော သေလာဂီရိတောင်၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပန်းပွတ်သများအဖြစ်နှင့် ငါနေထိုင်ခဲ့သည်။ ငါပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်ပြီးနောက် ကာလ၌ ငါ၏ကျောရိုးတော်ဓါတ်ကို ဋ္ဌပနာ၍ စေတီတည်လတ္တံ။ ကျောရိုးတော်ဓါတ်စေတီဟု တွင်လတ္တံ’ ဟု ဗျာဒိတ်ပေးထားခဲ့ပါသည်။ ထိုဓါတ်တော်ကို နောက်ကာလတွင် ကျောက်တော်ဓါတ်စေတီဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအမည်ကို အစွဲပြု၍ မြစ်တဘက်ရှိမြို့ကိုလည်း ကျောက်တော်မြို့ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။
ရုပ်ရှင်တော် သွန်းလုပ်ကြောင်း ယုံကြည်
ဤကဲ့သို့ ဘုရားဗျာဒိတ်ဝင်ဓါတ်တော်စေတီ (၂၄၈) ဆူရှိခဲ့ပါသည်။ ဤဓါတ်တော်စောတီများကို ဝေသာလီပြည့်ရှင် မဟာတိုင်းစန္ဒြားမင်းကြီးသည် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရှိရပါသည်။ ဤအကြောင်းကို ထောက်ရှု၍လည်း ထိုဓါတ်တော်စေတီများမှာ ဝေသာလီခေတ်မတိုင်မှီကပင် ရှိနှင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ရခိုင်သမိုင်းစာပေ အထောက်အထားအရလည်းကောင်း၊ ရုပ်ဝတ္ထုသက်သေဖြင့်လည်းကောင်း ကိုက်ညီနေပါ၍ စန္ဒသူရိယမင်းကြီးလက်ထက် မြတ်စွာဘုရားရှင် ဓည၀တီသို့ကြွရောက်ပြီး မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်ကို သွန်းလုပ်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။
နောက်တစ်ချက်က ဆရာတော်တို့ မန္တလေးမြို့တွင်ရှိနေသော မဟာမုနိဘုရားကြီးကို ဘယ်ကရယူခဲ့ပါသလဲ ဘုရား။ ဤမဟာမုနိဘုရားကို ဘိုးတော်ဘုရား၏သားတော် ဥပရာဇာသည် ရခိုင်ပြည်ကပင့်ယူခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါလား ဘုရား။ ဤဘုရားကြီးသမိုင်းမှာလည်း ရခိုင်ပြည်ဓည၀တီပြည့်ရှင် စန္ဒသူရိယမင်းသွန်းလုပ်ခဲ့ကြောင်းကို သမိုင်းစာပေအစောင်စောင်၌ တညီတညွတ်တည်း ဖော်ပြထားကြပါသည်ဘုရား။ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ရခိုင်ပြည်သို့ ကြွရောက်ခဲ့၍ သေလာဂီရိတောင်ပေါ်၌ တထောက်ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး စန္ဒသူရိယမင်းကြီးလျှောက်ထားသဖြင့် နန်းတော်သို့ ကြွရောက်သီတင်းသုံးပြီး မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်ကိုသွန်းလုပ်ခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ဖြေကြားလိုပါသည် ဘုရား။
မေးခွန်း နံပါတ် (၄)
သင်္ဂါယနာခြောက်တန်၌ မပါဘဲ ရခိုင်ပြည် ဝေသာလီရွှေတောင်ကြီး၌ စတုတ္ထသင်္ဂါယနာကို တင်ခဲ့သည်ဟု ရေးသားပြောဆိုကြသည်။ ဤအကြောင်းကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးပါ။
ဤမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တပည့်တော်အရှည်ဖြေကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်ဘုရား။ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်ပြီး မကြာမှီကာလတွင် အဇာတသတ်မင်းကြီးသည် ပထမအကြိမ်သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ပါသည် ဘုရား။ တင်ရသော အကြောင်းအရင်း၊ တင်ခဲ့သော နေရာနှင့် တိုင်းပြည်၊ တင်ရာ၌ အားပေးအားမြှောက်ပေးသောဘုရင်၊ တင်ရာ၌ ပါဝင်သောရဟန္တာများ၊ ဦးဆောင်သော ရဟန္တာ၊ ရည်ညွှန်းသောဂါထာပုဒ်၊ ပါဠိစသည်အားဖြင့် အင်္ဂါဆယ်တန်နှင့် ညီအောင်တင်ခဲ့ကြောင်း ဖတ်ရှုရပါသည်။
တပည့်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ဖက်မှ စာပေတို့မှာ သင်္ဂါယနာအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်္ဂါယနာကြီး၊ သင်္ဂါယနာချေ (ငယ်) ဟူ၍နှစ်မျိုး၊နှစ်စား တွေ့ရှိရပါသည်။ သင်္ဂါယနာကြီးများကို နံပါတ်စဉ်အတိုင်းရေတွက်ပြီးလျှင် သင်္ဂါယနာငယ်များကိုတော့ မိမိတို့၏ တိုင်းပြည်များအတွင်း၌ နံပါတ်စဉ်တပ်ထားခဲ့ကြပါသည်။ လေးမြို့ခေတ်ပဉ္စာမြို့၌ ဘုရင်မင်းရင်ဖြူသည် ဧကဒသမမြောက် သင်္ဂါယနာကိုတင်ခဲ့သည်ဟူ၍ ရေးသားထားချက်ကိုတွေ့ရပြီးလျှင် ပဉ္စမမြောက်သင်္ဂါယနာကိုလည်း တင်၏ဟုလည်း ရေးသားထားပါသည်။ ဘုရင်တစ်ပါးတည်း သင်္ဂါယနာ နှစ်ကြိမ်တင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်လျှင် မင်းရင်ဖြူသည် သင်္ဂါယနာကြီးကို ပဉ္စမအကြိမ်တင်ပြီးလျှင် သင်္ဂါယနာငယ်ကို တစ်ဆယ့်တကြိမ်တင်မည်ဟု မှတ်သားရပါသည်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့ သင်္ဂါယနာတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ရခိုင်ပြည်သို့စီးဆင်းလာသော ရေစီးကြောင်းကိုသာ လျှောက်ထားပါသည်ဘုရား။ တပည့်တော်ရှေ့က လျှောက်ထားခဲ့သည့်အတိုင်း တပည့်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်တွင် မိမိတို့၏ သာသနာဆိုင်ရာ ဆင်းသက်လာပုံသည်လည်းကောင်း၊ မိမိလူမျိုးတို့ ဆင်းသက်လာပုံကိုလည်းကောင်း၊ မြို့ပြအုပ်ချုပ်ချုပ်ရေး ဘုရင်မင်းဆက်များ စဉ်ဆက်ဆင်းသက်လာပုံကိုလည်းကောင်း သီးခြားတွေ့ရှိရပါသည်။ ဤအကြောင်းများကို မိမိတို့၏ သမိုင်းမှတ်တမ်းများမှာသာ တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်ဘုရား။၏
မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်ပြီးနောက် မကြာမှီကာလတွင် ပထမအကြိမ်သံင်္ဂါယနာကို ရာဇဂြိုလ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
Posted by www.sanoomg.com at 12:40 PM No comments: Links to this post
E Type Africa 3GP MP4 FLV Download
Posted by www.sanoomg.com at 12:10 AM No comments: Links to this post
Posted by www.sanoomg.com at 11:06 PM No comments: Links to this post
Posted by www.sanoomg.com at 10:56 PM No comments: Links to this post
Blog Archive August (1) October (1) November (3) December (4)